iOS 100 ၏ beta2နှင့် beta3အကြားပြောင်းလဲမှု ၁၀၀ ကျော်ရှိသည် အိုင်ဖုန်းသတင်း
iOS 11 နှင့်အခြားတစ်ခုအကြားပြောင်းလဲမှုအနည်းငယ်သာရှိပုံရသော်လည်းအမှန်တကယ်တွင် beta ဗားရှင်းများသည်လုံခြုံရေးနှင့်တည်ငြိမ်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည် သေးငယ်တဲ့အပြောင်းအလဲများနှင့်သတိမပြုမိသွားစေခြင်းငှါအသစ်အဆန်းထည့်ပါ ငါတို့အများအပြား။
ဤကိစ္စတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် iOS2beta 11 နှင့်အခြား beta3ပါသောကိရိယာတစ်ခုရှိပါ။ ဒီဟာကငါတို့နှစ်ခုအကြားကွဲပြားခြားနားမှုကိုရှာတွေ့ဖို့အငြင်းပွားစရာမရှိဘူး၊ ခုန်ပြီးတဲ့နောက်ငါတို့တွေ့ရမယ့်ဒီဗီဒီယိုကကျွန်တော်တို့ကိုအများကြီးပြတယ်၊ ငါတို့ထင်ထားတာထက်များတယ်။
၎င်းသည်သတင်းများသို့မဟုတ်အံ့မခန်းဖွယ်အပြောင်းအလဲများအကြောင်းပြောနေခြင်းမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်မူကွဲများအကြားပြောင်းလဲမှုများအကြောင်းပါ။ ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုပြတဲ့ဗီဒီယိုပါ Apple Pro သင်ကြည့်ရှုနိုင်သည့်အတွက် 100 ကျော်အပြောင်းအလဲများနှင့်သတင်း iOS 11 beta3၏နောက်ဆုံး beta version တွင်လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
တကယ်တော့ဒီသတင်းအချို့ (သို့) အပြောင်းအလဲအသေးစားများကိုသုံးစွဲသူများကလူမှုကွန်ယက်များ၊ စာတိုပေးပို့ရေးအဖွဲ့များနှင့်အခြားသူများမှတစ်ဆင့်တင်ပြပြီးပါပြီ ဗွီဒီယိုပေါ်ကကွဲပြားခြားနားမှုတွေကိုမြင်တာအမြဲတမ်းပိုကောင်းတယ် နှင့်ပြောင်းလဲမှုကိုရှင်းလင်းစေသည်။ ဤကိစ္စတွင်၎င်းတို့ပြသခဲ့သည့်အရာမှာ Apple မှတိုးတက်မှုများနှင့်ပြင်ဆင်မှုများကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည့်အချိန်ကာလ ((beta2မှ beta3ထွက်လာပြီးကတည်းက) ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းဗားရှင်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကြားကွာခြားမှုသေးငယ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ထပ်သတိရပါ beta ဗားရှင်းများတွင် bug များပါ ၀ င်နိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသော application အချို့နှင့်သဟဇာတမဖြစ်နိုင်ပါ ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone နှင့် ပတ်သက်၍ ပြသနာများမဖြစ်လိုပါကဘေးဖယ်ထားခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iOS ကို » iOS 11 » iOS 100 ၏ beta2နှင့် beta3အကြားပြောင်းလဲမှု ၁၀၀ ကျော်ရှိသည်
ဘယ်လို beta3မှာဘက်ထရီကော ????
ဘယ်လို beta3ကိုအတွက်ဘက်ထရီကော ???
သူတို့က IOS 11 ကိုမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စိတ် ၀ င်စားစရာအကောင်းဆုံးတစ်ခုထဲကတစ်ခုကတော့မျက်နှာပြင်အလယ်မှာစိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့အိုင်ကွန်ပေါ်မလာတဲ့အသံပမာဏကိုမြှင့်လိုက်တာနဲ့လျှော့ချလိုက်တဲ့အခါမှာသူပြောင်းလဲခဲ့တာဖြစ်တယ်။ is is beta3ပြောင်းရန်နည်းလမ်းရှိပါသလားသို့မဟုတ်နောင်တွင်အသစ်ပြောင်းခြင်းများကိုစောင့်နေရန်လိုအပ်ပါသလား ????
Facebook သည် iOS app တွင် GIFs ဖြင့်စတင်စမ်းသပ်သည်